Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha Earth | Mashiinka Dongheng
Waxyaabaha ku saabsan auger dhulkeena
KINGER dhulka auger wuxuu leeyahay 25 nooc oo udhaxeeya YDH mini ilaa YDH150000, oo ku haboon qodista qiiqa 0.8-50ton, isteerinka skid iyo backhoe loader iwm.
Dammaanad qaad hal sano ah oo mootada iyo 18 bilood oo dammaanad qaad ah.
SHAQAALAHA SHAQAALAHA SARE
Waxqabadka wanaagsan ee 'KINGER' micnaheedu waa inaan fiiro gaar ah siino si aan u horumarinno isku xirnaanta ugu kalsoon ee macaamiisha.
Qalabka Gear wuxuu qaataa tiknoolajiyadda daaweynta kuleylka gaarka ah, oo ay soo saartay Dhakhtarka Jaamacadda Tsinghua.
Waxay gaar u tahay aager dhulbeereedka, Shaft-ka-daadinta waa hal-gabal waddo gawaari ah oo laga soo ururiyey xagga sare oo lagu xiray lakabka daloolka dhulka.
Naqshaddani waxay dammaanad ka qaadaysaa in wiishku uusan waligiis dhicin. Waxay u samayn kartaa jawi nabadgelyo oo ammaan ah labada wadaha iyo sidoo kale shaqaalaha ku hareeraysan, taas oo ah muuqaal lagama maarmaan ah.
Qalabka oo dhan wuxuu ka kooban yahay 6 qaybood sida hoos ku xusan:
Waxaan leenahay hal biin oo xarig ah, laba jibbaar iyo laba jibbaaran oo loogu talagalay isku xirka 'KINGER auger drive' oo leh qashin qubka / gadaal gadaal / isteerinka iwm.
Waxaan sidoo kale soo saareynaa qodista auger iyo baarka dheereynta nafteena.Waxaa jira 8mm, 10mm, 12mm iyo 16mm dhumucda duullimaadka auger oo kala duwan si loo buuxiyo macaamiisha shuruudaha shaqada ee kala duwan. Dhererka caadiga waa 1.5m Laakiin waxaan sidoo kale leenahay dherer 1m, 2m iyo 2.5m. Baaxadda dhexroorku waa 100mmto 2000mm.Waxaan u soo saari karnaa sida aad ugu baahan tahay.
Sida barta kordhinta, waxaa jira 1n, 1.5m, 2.5m, 3m dherer kala duwan oo loo habeeyay oo la heli karo.
Dhexroorka baarka dherarka waa 89mm, 108mm, 127mm iyo 146mm.
Marka laga hadlayo ikhtiyaarka ilkaha, waxaannu leenahay goynta ilkaha, ilkaha wareegaya iyo ilkaha fidsan ee xaaladda ciidda kala duwan. Goynta ilkaha waxaa loo isticmaalaa in lagu ruxo, lagu duubo ama dhul badan oo quruurux ah. Ilkaha wareega waxaa loo isticmaalaa dhoobada, dhulka bacaadka ah, carrada barafaysan ama quruurux yar. Ilkaha fidsan waxaa loo isticmaalaa carrada caadiga ah.
KINGER earth auger wuxuu si balaaran u adeegsadaa awooda korantada, keymaha, shaqooyinka dowlada hoose ee isgaarsiinta, tareenka xawaaraha sare leh, Jaangooyooyinka, Beerista geedaha, caajis wanaagsan, Iskuduwaha aasaaska, Fududeynta rakibaada, Mashiinada kuleylka ee dhulka, Pole iyo Mast Installations, Solar Energy Solar, Bridge qodida wiishka iwm
KINGER earth auger waa A \_ lagu dabaqi karaa carro kala duwan, sida carrada la qaboojiyey, carrada saafiga ah, carrada jilicsan, dhoobada, ciidda, haraaga dabaysha, iyo sidoo kale quruurux, quruurux iyo wixii la mid ah.
Waxaan ku habboonaan karnaa moodel ku habboon miisaankaaga qodidda.
Hore: Baaldi fiicni
Xiga: Qodista MINI